मोबाइल इन्टरनेट स्पीडमा बेलायत पहिलो, यी हुन् फास्ट इन्टरनेट भएका देशहरु « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
मोबाइल इन्टरनेट स्पीडमा बेलायत पहिलो, यी हुन् फास्ट इन्टरनेट भएका देशहरु
२० असार २०७३, सोमबार ००:००
एजेन्सी । अमेरिकास्थित क्लाउड सर्भिस प्रदायक संस्था अकामाइले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार दक्षिण कोरिया विश्वमा सबैभन्दा तिव्र गतिको इन्टरनेट भएकेा देशमा पहिलो स्थानमा रहेको छ ।
रिपोर्ट अनुसार दक्षिण कोरियाको औषत इन्टरनेट स्पीड २९ एमबीपिएस रहेको छ भने पिक स्पीड १०३.६ एमबीपीएस रहेको छ । औषत कनेक्सन स्पीडमा नर्वे दोश्रो स्थानमा छ भने स्विडेन तेश्रो, हंगकंग चौथो, स्विजरल्याण्ड पाँचौ स्थानमा रहेका छन् । त्यस्तै लाटभिया, जापान, नेदरल्याण्ड, चेक गणतन्त्र तथा फिनल्याण्ड क्रमशः पाचौँबाट दशौँ स्थानमा रहेका छन् ।
त्यस्तै उच्चतम कनेक्सन स्पीडको हिसाबले सिंगापुर पहिलो स्थानमा रहेको छ । सिंगापुरमा इन्टरनेटको पिक कनेक्सन स्पीड १४६.९ एमबीपीएस रहेको छ । हंगकंग दोस्रो, इण्डोनेसिया तेश्रो तथा दक्षिण कोरिया चौथो स्थानमा रहेका छन् । कतार पाचौँ, मकाओ छैटौँ, जापान सातौँ, ताइवान आठौँ, रोमानिया नवौँ र मंगोलिया दशौँ स्थानमा रहेका छन् ।
तथ्यांक अनुसार नेपालको औषत इन्टरनेट स्पीड ३.८ एमबीपीएस रहेको छ । पछिल्लो ४ महिनामा इन्टरनेट स्पीडमा सबैभन्दा धेरै सुधार गर्ने देशमा नेपाल पनि परेको छ । यो अवधिमा नेपालको औषत इन्टरनेट गतिमा ९१ प्रतिशतले वृद्धि भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
औषत इन्टरनेट स्पीडको हिसाबले चीन १०० औँ, तथा भारत ११४ औँ स्थानमा रहेका छन् । त्यस्तै मोबाइल इन्टरनेट स्पीडको हिसाबले बेलायत पहिलो स्थानमा रहेको छ भने अल्जेरिया पुछारमा रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: Jul 4, 2016
वैज्ञानिकले पत्ता लगाए ६० वर्षको उमेरमा ३० वर्षजस्तै तन्नेरी देखिने अनौठो प्रविधि !
अहिलेको समय बैज्ञानिक युग हो भनेर भन्ने गरिन्छ । बैज्ञानिक युगमा मासिहरु विज्ञानको सायताले चन्द्रमा,
एनसेलले ल्यायो नयाँ वर्षमा आकर्षक अफर र रिचार्ज योजना
एनसेल आजियाटा लिमिटेडले याँ वर्ष २०७९ को अवसरमा आफ्ना ग्राहकका लागि आकर्षक न्यु इयर कम्बो
अब नेपालमा क्रिप्टो, हाइपर, अनलाइन जुवाका वेबसाइट र एप नचल्ने
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवा (बेटिङ) जस्ता वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन
यो हो २० सेकेन्डमै मुटुको रोग पत्ता लाग्ने नयाँ प्रविधि !
पछिल्लो समयमा मुटुरोग आम मानिसको समस्या बन्न पुगेको छ । यो रोग बद्लिदो वातावरण र
अब ‘खल्ती’बाट ब्लुबुक नवीकरण शुल्क तिर्न सकिने
नेपालको प्रचलित अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक खल्तीले आफ्ना निजी सवारी साधन भएका प्रयोगकर्ताहरुको लागि खल्ती
भायनेटले ल्यायो ५० हजार रुपैयाँको ‘अल्ट्राफाइ टिकटक च्यालेन्ज’ योजना !
भायानेट इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार रासीको ‘अल्ट्राफाइ टिकटक च्यालेन्ज’ योजना सार्वजनिक